Shina Ahoana no hanavahana sy hampiasana fitafiana mitokana sy akanjo fiarovana ara-pitsaboana Manufacture and Factory | Zhongmaohua
Ahoana ny fomba fanavahana sy hampiasana fitafiana mitokana sy akanjo fiarovana ara-pitsaboana
Inona ny fahasamihafana sy ny fampiasana fitafiana mitokana ary akanjo fiarovana hiarovana indrindra indrindra fa ny akanjo fiarovana ara-pitsaboana dia lava kokoa noho ny fitafiana mitokana, misy ambaratonga avo kokoa ary fiarovana tsara kokoa. Ankoatry ny fahazoana ireo filàna mitafy ny tanjaky ny hery ambony sy ny fanoherana avo lenta, ny roa dia matetika samy hafa noho ny antony fiarovana sy ny fotokevitra fiarovana.
Ahoana ny fanavahana ny fitafiana mitokana sy ny akanjo fiarovana
Na dia akanjo tsara amin'ny fiarovana ara-pitsaboana aza dia tsara lavitra noho ny fitafiana mitokana, fa ny vidiny dia somary avo be, ka ho an'ny asa samy hafa, ny safidy miaro ny akanjo fiarovana dia hafa. Ny tsy fitovian'ny toetran'ny akanjo fiarovana ara-pitsaboana sy ny akanjo fitokana-monina.
Miaro ny fampiasana akanjo sy ny fampiasana
Akanjo fiarovana ara-pitsaboana no fitaovana fiarovana ara-pitsaboana ampiasain'ny mpiasan'ny klinika rehefa mifandray amin'ny marary manana areti-mifindra Class A na Class A. Ireo voanio mitokana dia fitaovana arovana ampiasain'ny mpiasan'ny mpitsabo mba hialana amin'ny fandotoana ny ra, ny tsiranoka amin'ny vatana ary ny areti-mifindra hafa, na hiarovana ny marary amin'ny aretina.
Samy hafa ny marika mpampiasa
Manao akanjo lava:
1. Rehefa mifandray amin'ireo marary manana areti-mifindra mifindra amin'ny fifandraisana, toy ny marary manana areti-mifindra, marary manana tsindrona miady amin'ny bakteria miaro amin'ny zava-mahadomelina, sns.
2. Fiarovana ny marary, toy ny fitiliana sy ny fitsaboana ny marary manana fandoroana be dia be ary ireo marary manana famindrana taolana.
3. Rehefa mety voadidin'ny ra ny marary, ny tsiranoka amin'ny vatana, ny tsiambaratelo ary ny feces.
4. Ny fidirana ny departemanta lehibe toy ny ICU, NICU, paroasy miaro, sns., Dia tokony hiorina amin'ny tanjon'ny mpiasan'ny mpitsabo hiditra sy mifandray amin'ny marary, ary ny fepetra anatiny.
Manaova akanjo fiarovana:
Rehefa tratra amin'ny marary aretina sy voan'ny aretin-trosa ny marary mandriaka, dia mety hokaoka amin'ny ran'ny marary, ny tsiranoka ao amin'ny vatana, ny tsiambaratelo ary ny feces.
Fampiasana samihafa amin'ny fitafiana miaro
Ny akanjo fiarovana hiaro amin'ny fitsaboana dia ny fisorohana ny mpitsabo amin'ny aretina. Anisany mitokana tokana izy io ary mikendry ny mpitsabo; ary ny fitafiana mitokana dia ny fisorohana ny marary tsy ho tratry ny aretina na koa voaloto ary mba hisorohana ny mararin'ny marary.
Ny tombony azo amin'ny fiarovana fiarovana amin'ny fitafiana mitokana
1. Ny akanjo fiarovana ara-pitsaboana dia ampahany manan-danja amin'ny fitaovana fiarovana ara-pitsaboana koa. Ny takiana fototra dia ny fanakanana ireo zava-manimba toy ny virosy sy ny bakteria, mba hiarovana ny mpiasan'ny mpitsabo amin'ny aretina mandritra ny fitiliana sy ny fikarakarana.
2. Ny akanjo fiarovana ara-pitsaboana dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra ilaina amin'ny fampiasana, miaraka amin'ny fampiononana sy ny fiarovana tsara kokoa, toy ny fitoniana tsara kokoa, ny fampandehanana ny afo sy ny fanoherana ny alikaola.
3. Ny akanjo fiarovana ara-pitsaboana dia manana ny mampiavaka ny fiasa anti-permeation, ny fofon'aina tsara, ny hery avo ary ny fanoherana ny tsindry hidrostika. Ampiasaina amin'ny tontolo indostrialy, elektronika, ara-pitsaboana, simika ary tontolo fisorohana ny bakteria ireo.
Tsy mitovy koa ny hevitra iray. Ireo izay manome hôpitaly amin'ny fangatahan'ny fanjakana dia mitaky "fahazoan-dàlana fisoratana anarana ara-pitsaboana", noho izany dia tsy maintsy voamarina avokoa ireo akanjo fiarovana ara-pitsaboana, ary amin'ny ankapobeny ny fitafiana mitokana dia ampiasaina amin'ny biby fiompy, laboratoara, sns. Ny olona rehetra dia tsy maintsy mandinika izay tsy manana Ny fanamarinana dia tsy afaka manao fitsarana ny fitafiana mitokana ary tsy afaka manome ny hopitaly.